Knowledge – OK Media
အမျိူးသမီးတိုင်းမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သား အိမ်‌ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ ရှေးပြေလက္ခဏာ ၄ ရပ်
March 19, 2022 Ok MediaLeaveaComment on အမျိူးသမီးတိုင်းမပေါ့ဆသင့်တဲ့ သား အိမ်‌ခေါင်းကင်ဆာ ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာသိနိုင်တဲ့ ရှေးပြေလက္ခဏာ ၄ ရပ်
အမ်ိဴးသမီးတိုင္းမေပါ့ဆသင့္တဲ့ သား အိမ္‌ေခါင္းကင္ဆာ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာသိႏိုင္တဲ့ ေရွးေျပလကၡဏာ ၄ ရပ္ ရင္သားကင္ဆာ ၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ၊ သားအိမ္ကင္ဆာ စသျဖင့္ ေရာဂါေတြေၾကာင့္အ မ်ိဳးသမီးေတြမွာ ေသဆုံးမႈ မ်ားျပားလ်က္ရွိပါတယ္ ။ ယခုလို အျဖစ္မ်ားတဲ့ ေရာဂါေတြထဲကသားအိမ္ကင္ဆာရဲ႕ ေရွ႕ေျပးလကၡဏာ (၄)ခုကိုေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ သားအိမ္ကင္ဆာဟာ အသက္ ၃၀ ႏွင့္ ၄၀ အ႐ြယ္ေတြမွာ အျဖစ္မ်ားေလ့ရွိၾကပါတယ္ ။ႀကိဳတင္သိရွိထားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မွီကုသႏိုင္မွာပါ ။ ၁ ။ ဗိုက္ပူလာျခင္း – မိမိရဲ႕ ဝမ္းဗိုက္ဟာ သာမန္မဟုတ္ဘဲ တေျဖးေျဖးပူေဖာင္းလာတယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ဒါဟာ သားအိမ္ကင္ဆာအက်ိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၂။ ဝမ္းဗိုက္ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ တင္ပဆုံ နာက်င္ျခင္း – ရက္သတၱပါတ္ ၃ပါတ္ခန႔္ၾကာေအာင္ ဒီလိုနာက်င္ေနျခင္းဟာ သားအိမ္ကင္ဆာရဲ႕ လကၡဏာျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္ ။ […]
Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန်
March 19, 2022 Ok MediaLeaveaComment on Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန်
Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် စိတ်ကူးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း ခံနေရတဲ့ သူ ဆိုတာ. . . … Online ပေါ်မှာ ပုံတင်ကောင်းသော အစ်မ ညီမလေးများ မကျော်ပဲဖတ်ပေးကြပါရန် ၏စာစောင်ကို ၂၀၁၃ မှာ ရေးသားခဲ့တာပါ ယခု မဖတ်ရသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးပါရစေ (စာရေးသူအသုံးအနှုံး ရိုင်းကောင်း ရိုင်းနိုင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့် စာဖတ်သူများ နားလည်ပေးစေလိုပါတယ်…ဒီစာကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါ…ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာအမှန်တရားတစ်ခု သိရှိလက်ခံလိုက်ကြရမယ်ဆိုရင် ရေးရကြိုးနပ်ပါပြီ)Facebook ပေါ်မှာ မိန်းမသားတစ်ချို့ မှားယွင်းမှုတွေ နဲ့ သာယာနေကြတာတွေ့ရတယ်… ပုရိသ ကျားသဘာဝ ကို နားမလည်… ထင်ပေါ်မှုအတွက် မပေါ် ပေါ်အောင်ဖော်လို့… အဝတ်ဗလာလေးတွေနဲ့ဆယ်လီရူး ရူးနေကြပြန်တယ် ….သမီးလှလာဟင့်… ဆိုတဲ့နောက်မှာ သားကောင်ရှာတဲ့ ကျားတချို့ပေးတဲ့ […]
ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ငှက်တွေ ဓာတ်မလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (မီးပြတ်နေလို့ မဟုတ်ပါ)
March 13, 2022 March 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ငှက်တွေ ဓာတ်မလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (မီးပြတ်နေလို့ မဟုတ်ပါ)
uni ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာ နားနေတဲ့ ငှက်တွေ ဓာတ်မလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း (မီးပြတ်နေလို့ မဟုတ်ပါ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုတာ လူတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်လွန်းတဲ့အရာဖြစ်သလို အရမ်းလည်း အန္တရာယ် များတဲ့အရာပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခုဖြတ်စီးသွားရင် စက္ကန့်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်သွားနိုင်ပြီး နှလုံးကို ပျက်စီး သွားစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပလက်ပေါက်တွေထဲ လက်ချောင်းတွေမထည့်မိဖို့၊ အိမ်မှာ လျှပ်စစ်သွယ်ထားတဲ့ဝိုင်ယာကြိုးတွေကို အမှုမဲ့မကိုင်မိဖို့ ကျွန်တော်တို့ အမြဲသတိထားနေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းထားတဲ့ဓာတ်ကြိုးတွေက အခုလောက် အရမ်းအန္တရာယ်များတယ်ဆိုပါလျက် “ငှက်တွေကျတော့ ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာနားရင် ဘာလို့ဓာတ်မလိုက်လဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို တွေးမိဖူးကြမှာပါပဲ။ ဓာတ်ကြိုးပေါ်မှာနားနေတဲ့ငှက်တွေကို လျှပ်စစ်ဖြတ်မစီး (ဓာတ်မလိုက်) ရတဲ့အကြောင်းရင်းက (၂) ခုရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လျှပ်စစ်စီးကူးဖို့ မကောင်းမွန်လို့ပါပဲ။ ငှက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဆဲလ်နဲ့ တစ်ရှုးတွေဟာ လျှပ်စီးကြောင်းဖြတ်စီးနိုင်ဖို့ ကြေးနီဝိုင်ယာကြိုးတစ်ချောင်းထက် […]
မေန႔ညက၈နာရီေက်ာ္ေလးမွာ သကၤန္ျခဳံထားတဲ့ ကိုရင္ေလးတစ္ပါးက ပဲနံျပားနဲ႔ ခ်ိဳစိမ့္လဖက္ရည္ေလးပါဆယ္ဆြဲၿပီး သခၤ်ိဳင္းကုန္းထဲဝင္သြားလို႔လိုက္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ …..
March 11, 2022 Ok MediaLeaveaComment on မေန႔ညက၈နာရီေက်ာ္ေလးမွာ သကၤန္ျခဳံထားတဲ့ ကိုရင္ေလးတစ္ပါးက ပဲနံျပားနဲ႔ ခ်ိဳစိမ့္လဖက္ရည္ေလးပါဆယ္ဆြဲၿပီး သခၤ်ိဳင္းကုန္းထဲဝင္သြားလို႔လိုက္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ …..
မေန႔ညက၈နာရီေက်ာ္ေလးမွာ သကၤန္ျခဳံထားတဲ့ ကိုရင္ေလးတစ္ပါးက ပဲနံျပားနဲ႔ ခ်ိဳစိမ့္လဖက္ရည္ေလးပါဆယ္ဆြဲၿပီး သခၤ်ိဳင္းကုန္းထဲဝင္သြားလို႔လိုက္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ….. “မေန႔ညက၈နာရီေက်ာ္ေလးမွာ သကၤန္ျခဳံထားတဲ့ ကိုရင္ေလးတစ္ပါးက ပဲနံျပားနဲ႔ ခ်ိဳစိမ့္လဖက္ရည္ေလးပါဆယ္ဆြဲၿပီး သခၤ်ိဳင္းကုန္းထဲ ကၽြန္ေတာ္ကိုအတူဝင္ခိုင္းတယ္ဗ်ာ…….” မေန႔ည ၈နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္က က်ေနာ္လက္ဖက္ရည္ေသာက္ဖို႔ ေသာက္ေနက် ဆိုင္ထဲကို ဝင္လိုက္တယ္….. ထိုင္ခုံက မရွိေတာ့ ကိုရင္ေလး ထိုငိေနတဲ့ စားပြဲမွာပဲ ဝင္ထိုင္လိုက္တယ္ စားပြဲထိုးေကာင္မေလးက က်ေနာ့္အတြက္ …. လက္ဖက္ရည္ခြက္ ခ်ေပးေနတုန္း ကိုရင္ေလးက ေမးလိုက္တယ္…. ဒကာမေလးးကိုရင္ မွာထားတာ ၾကာပီေလ မရေသးဘူးးလား တဲ့….. က်ေနာ္လည္းးမေနနိုင္ မထိုင္နိုင္ ေမးလိုက္မိတယ္…. ကိုရင္က ဘာမွာထားတာလဲ လို႔….. ခ်ိဳစိမ့္နဲ႔ ပဲနံျပား မွာထားတာ….. အဲဒါနဲ႔ က်ေနာ္လည္းးျပန္ေမးလိုက္တယ္….. ကိုရင္က ဒီအခ်ိန္စားလို႔မရဘူးေလ ဆိုေတာ့…. မဟုတၻဴးးေအမ့အၾတကၱဲ့….. အခုထိ မရေသးဘူးး […]
သာမဏေကျော် ပထမ အဆင့်မှသည် တော်လှန်ရေး တပ်သားဆီသို့
February 16, 2022 Ok MediaLeaveaComment on သာမဏေကျော် ပထမ အဆင့်မှသည် တော်လှန်ရေး တပ်သားဆီသို့
“ဘာစိတ်ဓါတ်လဲ သံမဏိစိတ်ဓါတ်၊ ဘာလုပ်ဖို့လဲ တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ “ အစရှိသည့်အသံတို့သည် တောတွင်းတစ်နေရာရှိ တော်လှန်ရေး တပ်စခန်း တစ်ခုလုံး ပျံနှံနေသည်။ အဆိုပါအသံများသည် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီအား လက်နက်ကိုင်ကာ ခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲနေသည့် တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များ လေ့ကျင်ခန်းလုပ်ရင်း ရွတ်ဆိုနေသည့် အသံများ ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များထဲတွင် ရဲဘော် ဖီးနစ်သည်လည်း တစ်ယောက် အပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသည့်ဘဝကို လာ​ရောက်မည့် တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များသည် သူတို့၏ ပုံမှန်ဘဝများကို စွန့်လွှတ် ခဲ့ရပါသည်။ ရဲဘော် ဖီးနစ်၏ စွန့်လွှတ်မှုများသည် တခြား တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များနှင့် မတူခြားနား နေပါသည်။ အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ အာဏာ မသိမ်းမီက ရဲဘော်ဖီးနစ်သည် ရှင်စာရိတ္တ အမည်ဖြင့် […]
သီပေါမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက် ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတဲ့စုဖုရားလတ်ကို ဗန္ဓုလသတင်းစာတိုက်သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ မေးမြန်းထားသည့် အင်တာဗျူး
February 14, 2022 Ok MediaLeaveaComment on သီပေါမင်းနတ်ရွာစံပြီးနောက် ရန်ကုန်ကိုပြန်လာတဲ့စုဖုရားလတ်ကို ဗန္ဓုလသတင်းစာတိုက်သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ မေးမြန်းထားသည့် အင်တာဗျူး
သီပေါမင်း နတ်ရွာစံတော့ စုဖုရားလတ်ဟာ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာခဲ့ပြီး ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း အမှတ် ၂၄ နေအိမ်မှာ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မိဖုရားကြီးနေထိုင်ရာအိမ်ကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်မှာ ဗန္ဓုလသတင်းစာသတင်းထောက်တစ်ဦးမှ သွားရောက်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထောက် – အရှင်မိဖုရားကြီး အသက်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲ။ စုဖုရားလတ် – ၆၅နှစ် ရှိပါပြီ ။ မေးချင်တာရှိရင် မေးပါ။ သတင်းထောက် – ရတနာဂီရိမှာ စံနေတော်မူတုန်းက လစာရိက္ခာတော် ဘယ်လောက်ဆက်သပါသလဲ။ စုဖုရားလတ် – ပထမ တစ်သောင်းဆက်တယ် ။ နောက် ခြောက်ထောင်ပဲ ဆက်တော့တယ်။ သတင်းထောက် – ရိက္ခာအပြင် အပိုဆက်တာ ရှိပါသလား။ စုဖုရားလတ် – လစာအပြင် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တန်ခူးလမှာ ငါးထောင် ၊ သီတင်းကျွတ်လမှာ တစ်ထောင့်ငါးရာ […]
လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား
February 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား
လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား ကိုယ့်ရဲ့အမူအရာ ၊ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဗွေရာနဲ့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အရောင်တွေဟာ ကိုယ့်အကြောင်း ပြောပြနေတယ် ဆိုတာက ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်လက်မရဲ့ ပုံစံက ကိုယ့် ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးကို ဖော်ပြနေတယ် ဆိုရင်ရော သင်ယုံမလား ။ တစ်ချို့သော လူတွေ လက်မထောင် တဲ့အခါ လက်မက ဆန့်နေပြီး တစ်ချို့သော သူတွေကျတော့လည်း ကွေးနေလေ့ ရှိ တတ်ပါတယ် ။ လက်မ ဖြောင့်တဲ့သူ လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား လက်မ ကောက်တဲ့သူနဲ့ဖြောင့်တဲ့သူများ၏ စိတ်နေသဘောထား လက်မဆန့်နေတဲ့ သူတွေဟာ များသော အားဖြင့် စိတ်ဆတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်ညူး လွယ်ကြတဲ့ သူတွေပါ။ […]
ထူးထူးခြားခြား ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကျောက်ပန်းချီကားနဲ့ စေတီဘုရား
February 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on ထူးထူးခြားခြား ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကျောက်ပန်းချီကားနဲ့ စေတီဘုရား
ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေက်ာက္ပန္းခ်ီကားနဲ႔ ေစတီဘုရား မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ၿမိဳ႕ကဒါရပ္ကြက္ ကမာၻေအး ဘုရားလမ္း ကေန ေတာင္တန္းကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေ႐ႊေရာင္တဝင္းဝင္းနဲ႔ ေစတီေလးဖူးေတြ ႕ရမွာပါ။ ထိုေစတီေလးရဲ႕ထူးျခားမႈကေတာ့ နဂါးမယ္ေတာ္ ပုံပဲ ျဖစ္ ပါတယ္။ ေဆးေရးပန္းခ်ီျဖစ္ၿပီး အျမင့္ကေတာ့၃၈ ေတာင္ခန႔္ရွိတယ္။ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ ႕အႀကီးဆုံး ပန္းခ်ီကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္ေတာင္နံရံေပၚမွာ ေရးဆြဲထားတာပုံေလးပါ။ ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေက်ာက္ပန္းခ်ီကားနဲ႔ ေစတီဘုရား ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေက်ာက္ပန္းခ်ီကားနဲ႔ ေစတီဘုရား ထူးထူးျခားျခား ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေက်ာက္ပန္းခ်ီကားနဲ႔ ေစတီဘုရား ေပါင္ၿမိဳ႕ကေန လွမ္းၾကည့္ပါက ေစတီသာ ျမင္ရ မွာပါ။ အခုေတာ့ ထိုေဆးေရးပန္းခ်ီကို ကုသိုလ္ျဖစ္ ေစတနာရွင္လူတစ္စုက ေရွးမူမပ်က္ျပန္ လည္ၿပီး ေဆးတင္ျခင္းျပဳ လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား […]
February 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on လူသားများ ဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့်မရတဲ့ စေတီထူး ၃ ဆူ ကို သင်သိပြီးပြီလား
လူသားမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူ ကို သင္သိၿပီးၿပီလား လူသားမ်ား မဖူးရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူဆိုတာ႐ွိပါတယ္… (၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္၊ (၂) ဒုႆေစတီေတာ္၊ (၃) မေဟသရေစတီေတာ္ တို႔ျဖစ္ၾကတယ္။ (၁) စူဠာမဏိေစတီေတာ္ဆိုတာ — တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္မွာ သိၾကားမင္းတည္ထားတဲ့ ေစတီျဖစ္တယ္။ သိဒၶတၳမင္းသားဟာ က႑ကျမင္းကိုစီးၿပီး ေမာင္ဆန္ႏွင့္ အတူေတာထြက္ၾကရာမွာ အေနာ္မာျမစ္ကိုေရာက္ေသာအခါက႑ကျမင္းႏွင့္ လူသားမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူ ကို သင္သိၿပီးၿပီလား လူသားမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူ ကို သင္သိၿပီးၿပီလား လူသားမ်ား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခြင့္မရတဲ့ ေစတီထူး ၃ ဆူ ကို သင္သိၿပီးၿပီလား ေမာင္ဆန္ကို ျပန္လႊတ္၍ အေလာင္းေတာ္သည္ […]
February 13, 2022 Ok MediaLeaveaComment on တစ်လမှာ ၂ ကြိမ်သာ လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ သောကကင်းစင်ငွေဝင်ငွေပွားအစီရင်
တစ္လမွာ ၂ ႀကိမ္သာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ေသာကကင္းစင္ေငြဝင္ေငြပြားအစီရင္ ေသာက ကင္းစင္ေငြဝင္ အစီရင္ ယုံၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္ ပါက အက်ိဳးထူး မ်ားသည္ ေသာက ကင္းစင္ေငြ ဝင္ေငြပြား အစီရင္ ယုံၾကည္စြာ လုပ္ေဆာင္ပါက အက်ိဳးထူးမ်ားသည္ မိတ္ေဆြမ်ား မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ားယခု ဆရာတင္ေပးမည့္ အစီရင္ေလးက တစ္လမွာ ၂ ႀကိမ္သာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ေသာကကင္းစင္ေငြဝင္ေငြပြားအစီရင္ တစ္လမွာ ၂ ႀကိမ္သာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ေသာကကင္းစင္ေငြဝင္ေငြပြားအစီရင္ တစ္လမွာ ၂ ႀကိမ္သာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ ေသာကကင္းစင္ေငြဝင္ေငြပြားအစီရင္ မိမိရည္မွန္း စီမံထားသည့္ အလုပ္ကိစၥမ်ား လုပ္ခ်င္တိုင္း မလုပ္ႏိုင္ ျဖစ္ခ်င္တာ မျဖစ္ႏိုင္ျဖစ္ေန တာေတြက တစ္မ်ိဳး လုပ္ခ်င္ေနတာေတြက တစ္မ်ိဳး အလြဲ႕လြဲ႕အေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနၾက သည့္ကာလအေတာအတြင္းမွာ စိတ္ရႈပ္ စိတ္ေႏွာက္ယွက္ျဖစ္ေနျခင္းေငြေၾကး […]